သင်၏ကားကိုသြစတြေးလျားမှတင်ပို့ခြင်းအပါအ ၀ င်၊ သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်းအကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး၊ ယူကေကုန်းတွင်းတင်ပို့ခြင်း၊ DVLA မှတ်ပုံတင်ခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုကိုင်တွယ်ပြီးသင်၏အချိန်၊
ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး (Ocean Freight)
သြစတြေးလျမှမော်တော်ယာဉ်များအတွက်၊ သင့်ကိုယ်စားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုကျွန်ုပ်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။ ၎င်းတွင်သင်၏ယာဉ်များကိုသမုဒ္ဒရာ - သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ တင်ချခြင်းနှင့်ချခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
ယူကေတွင်လိုက်နာမှုရှိစေရန်မော်တော်ယာဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ပြီးစမ်းသပ်သည်။ ထို့နောက်သက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့၏ပုဂ္ဂလိကပိုင် IVA စစ်ဆေးမှုလမ်းကြောင်းတွင်ပြုလုပ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုးကားချက်များသည်အပြည့်အ ၀ ပါ ၀ င်ပြီးယူကေသို့သင်၏တိကျသောတင်သွင်းမှုနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်သြစတြေးလျမှယူကေသို့မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောကုန်ကျစရိတ်များကိုသိရှိရန်ကားတင်သွင်းမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် ကျေးဇူးပြု၍ ကိုးကားပုံစံကိုဖြည့်ပါ၊
Australiaစတြေးလျမှဗြိတိန်သို့ကားများတင်သွင်းသော နှစ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသောကားတစ်စီးဖြစ်သည် သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏ကားများကိုကိုင်တွယ်ရန်သြစတြေးလျရှိအဓိကဆိပ်ကမ်းများအားလုံးတွင်လည်ပတ်နေသည့်အထူးကျွမ်းကျင်သူများ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Brisbane၊ ဆစ်ဒနီ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့နှင့်ပါ့တ်မြို့၏အကန့်အသတ်အတွင်းတွင်အခမဲ့စုဆောင်းခြင်းကိုကမ်းလှမ်းပါသည်။ သို့သော်သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကိုသြစတြေးလျရှိလယ်ကွင်းများမှသင်၏တောင်းဆိုချက်အရကောက်ယူရန်ကိုးကားချက်ထပ်ထည့်နိုင်သည်။
ကွန်တိန်နာများကို သုံး၍ ကားများကိုပုံမှန်အားဖြင့်တင်ပို့ပါတယ်။ ဒါကသင့်ဖောက်သည်ကိုယ်စားတင်သွင်းသောအခြားကားများနှင့်ကွန်တိန်နာ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုမျှဝေခြင်းအားဖြင့်သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကိုယူကေသို့တင်သွင်းမှုနှုန်းလျှော့ချခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေပါတယ်။
ကွန်တိန်နာတင်ပို့ခြင်းသည်သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကိုယူကေသို့တင်သွင်းရန်အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးမကြာခဏကုန်ကျမှုအသက်သာဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကားအတွက်သီးသန့် 20ft ကွန်တိန်နာတစ်လုံးလိုချင်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်လည်းထောက်ပံ့ပေးသောကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ မေးပါ။
သြစတြေးလျမှမော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းသည့်အခါမော်တော်ယာဉ်များ၏မူလ၊ အသက်နှင့်သင့်အခြေအနေပေါ် မူတည်၍ ယူကေတွင်အကောက်ခွန်များကိုရှင်းလင်းရန်နည်းလမ်းလေးမျိုးရှိသည်။
ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူအဖြစ်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသို့ပြန်လာပါသလား။ အကယ်၍ သင်သည်ကားကိုခြောက်လကျော်ပိုင်ဆိုင်ပြီးသြစတြေးလျားတွင် ၁၂ လကြာနေထိုင်ကြောင်းအထောက်အထားရှိလျှင်သင်၏တင်သွင်းမှုသည်များသောအားဖြင့်သွင်းကုန်အခွန်နှင့်အခွန်စည်းကြပ်မှုမခံရပါ။
(၁၀) နှစ်အောက်မော်တော်ယာဉ်များအတွက်ယူကေသို့ရောက်ရှိပါကသင်၏မော်တော်ယာဉ်သည်ယူကေအမျိုးအစားခွင့်ပြုချက်ကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့က IVA စမ်းသပ်မှုကိုအသုံးပြုပြီးဒီလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်ခုတည်းသောပုဂ္ဂလိကပိုင်လည်ပတ်မှုရှိသည် IVA စမ်းသပ်ခြင်း ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ယာဉ်သည်အစိုးရစမ်းသပ်မှုစင်တာတစ်ခုတွင်စစ်ဆေးရန် slot ကိုစောင့်ဆိုင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာလျှင်၊ လအနည်းငယ်ကြာလျှင်ရနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် IVA site ကိုအပတ်တိုင်း စမ်းသပ်၍ ထို့ကြောင့်သင်၏ကားကိုမှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိလမ်းများပေါ်တွင်အမြန်ဆုံးပြောင်းလဲမှုရှိသည်။
ကားတိုင်းသည်ကွဲပြားခြားနားပြီးထုတ်လုပ်သူတိုင်းတွင် ၄ င်းတို့၏ဖောက်သည်များအားတင်သွင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်အားကူညီခြင်းအတွက်ကွဲပြားသောအထောက်အကူပြုစံနှုန်းများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏တစ် ဦး ချင်းအခြေအနေအတွက်အကောင်းဆုံးအမြန်နှုန်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်ရွေးချယ်ခြင်းကိုဆွေးနွေးနိူင်သည်။
သြစတြေးလျကားများတွင် MPH စာဖတ်ခြင်းနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနှင့်မကိုက်ညီပါကနောက်ဘက်မြူမှုန်ဝါးခြင်းများကိုပြသရန်အမြန်နှုန်းအပါအဝင်အချို့သောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများလိုအပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့တင်သွင်းခဲ့သည့်မော်တော်ယာဉ်အမျိုးအစားများနှင့်မော်ဒယ်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စာရင်းပြုစုထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏တစ် ဦး ချင်းစီသည် ၄ ​​င်း၏ IVA စမ်းသပ်မှုအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်တိကျစွာခန့်မှန်းနိုင်သည်။
အသက် ၁၀ နှစ်ကျော်သောကားများသည်အမျိုးအစားခွင့်ပြုချက်ကင်းလွတ်သော်လည်းသို့သော် MOT ဟုခေါ်သည့်လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှုနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုမီ IVA စမ်းသပ်မှုတွင်အလားတူပြုပြင်မှုများလိုအပ်သည်။ ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများသည်အသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးနောက်ဘက်မြူခိုးမီးများပေါ်တွင်သာမူတည်သည်။
သင်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတစ် ဦး လား
အိမ်တွင်း TOR ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်၏ပြသနာများရှိပါကနေထိုင်ရန်ပြောင်းရွှေ့ရန်သင်၏လျှောက်လွှာကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီနိုင်သည်။
သင်၏မော်တော်ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ရန်မှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်လွယ်ကူသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ TOR လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်မေးမြန်းချက်နှင့်မဆိုဆက်သွယ်ရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်။
သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကို ToR အစီအစဉ်အရတင်သွင်းလိုပါသလား။
ကျွန်ုပ်၏ကားတင်သွင်းမှုသည်သင်၏မော်တော်ယာဉ်ကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသို့သယ်ဆောင်လာခြင်းမှစိတ်ဖိစီးမှုများအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ရန်အတွက်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။ ToR အစီအစဉ်အရတင်သွင်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိုးကားချက်များနှင့်နောက်ထပ်လမ်းညွှန်ချက်များအတွက်ဆက်သွယ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
သင်၏ကားကိုယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းသို့တင်သွင်းသည့်အခါနေထိုင်သူများကိုပြောင်းရွှေ့ရန်အတွက်သြစတြီးယားဒေါ်လာဖြင့်ငွေပေးချေမှုကိုကျွန်ုပ်တို့လက်ခံနိုင်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ မှတ်သားပါ။
ကျွန်ုပ်သည်သြစတြေးလျမှပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတစ် ဦး ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ကားအတွင်းသို့ပစ္စည်းများကိုယူဆောင်လာနိုင်ပါသလား။
လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ သင်၏မော်တော်ယာဉ်အတွင်းရှိနေရာကိုအခွင့်ကောင်းယူလိုသည့်အချက်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ကျွန်ုပ်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသည်။ သင်၏ကားနှင့်သင်၏မော်တော်ယာဉ်များကိုမော်တော်ယာဉ်ပြုပြင်ခြင်းမပြုလုပ်မှီသိုမဟုတ်သိုလှောင်ခြင်းတွင်ထားရှိပါမည်။ သြစတြေးလျမှကွန်တိန်နာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်သင်ပေးရမည့်နေရာအများစုကိုအသုံးချရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏သြစတြေးလျမော်တော်ယာဉ် MOT လိုပါသလား?
MOT မှကင်းလွတ်ခွင့်မရှိပါကသင်၏သြစတြေးလျားမော်တော်ယာဉ်အားလုံခြုံစိတ်ချရမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်နှင့်ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောမှန်ကန်သောထုတ်လွှတ်မှုများကိုစစ်ဆေးသော MOT တစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်။
သွင်းကုန်နှင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက်, သင်သည်သင်၏မော်တော်ယာဉ်ရောင်းနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပါက ၁၂ လစောင့်ဆိုင်းရပါလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်လျှင်အခွန်နှင့် VAT ကို HMRC သို့ပေးဆောင်ရပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏သြစတြေးလျယာဉ်သည် IVA စာမေးပွဲလိုပါသလား?
သြစတြေးလျစျေးကွက်အများစုသည်လက်ယာမောင်းစနစ်ဖြစ်သောကြောင့် ၄ င်းတို့သည် IVA စစ်ဆေးမှုကိုလိုက်နာရန်ပြသရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏မော်တော်ယာဉ်ပုံစံနှင့်ပုံစံပေါ် မူတည်၍ မှတ်ပုံတင်ခြင်းလမ်းကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုအကြံပြုပါမည်။
သင်၏သြစတြေးလျားကားကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးမှအာမခံထားရန်နှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ထိုအချိန်တွင်မေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ကူညီရန်ထက်ပိုပြီးဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်၏သြစတြေးလျသွင်းကုန်တွင် tracker ထည့်သွင်းလို့ရမလား။
အကယ်၍ သင်သည်မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးကိုတင်သွင်းလျှင်သင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုကာကွယ်ရန် tracker တပ်ဆင်ထားသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ဆက်သွယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ tracker ၀ န်ဆောင်မှုကိုမေးပါ။